तपाई को हुनुहुन्छ यदि तपाई अझै इ-मेल भाईरससँग कसरी डील गर्ने भनेर थाहा छैन! - Semalt सुरक्षा सल्लाह
जो कोहीसँग इ-मेल ठेगाना छ भाइरस संक्रमणको जोखिममा पर्दछ तर आधारभूत इन्टर्नेट सुरक्षा अवलोकन गर्दा यस जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। साइबर अपराध घटनाहरु को बृद्धिको कारणले, यो इन्टरनेट सुरक्षा को बारे सतर्क रहनु महत्त्वपूर्ण छ। साइबर अपराधीहरूलाई अवसरको एकल झण्डा छोडिनु हुँदैन। इ-मेल मार्फत भाइरसहरू फैलाउने काम आज प्रायः प्रयोग हुने विधिहरूमा नहुन सक्छ, तर यो अझै पनि सम्भावना छ कि यो आक्रमण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक फ्रान्क Abagnale अनुसार, ईमेल मार्फत फैलिएको कुनै पनि भाइरसबाट बच्न दैनिक आधारमा कसरी काम गर्ने भनेर जान्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
ईमेल मार्फत भाइरस संक्रमण बाट जोगिनका तरिकाहरू
१. भाइरस कसरी डेलिभर गरिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिइदै
इन्टरनेटको बृद्धि भइरहेको छ र भाइरस र मालवेयर 'उद्योग'। प्राय: साइबर क्राइमण्डलले विधिका विधिहरू प्रयोग गर्दछ जुन कि एकदम भर्खरको हो वा ती जुन आश्चर्यका साथ शिकारहरूलाई पक्रन बिर्सिसकेको छ। अनजानमा पक्राउ पर्नबाट जोगिन, हालको डेलिभरी विधिहरू मात्र थाँहा जान्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई कसरी टाढा राख्न सक्नुहुन्छ।
२. कुनै पनि वेबसाईटमा तपाईको ईमेल नदिनुहोस्
त्यहाँ धेरै खराब साइटहरू छन् भाइरस र अन्य साइबर अपराधमा मानिसहरूलाई फसाउन को लागी। आफैंलाई र तपाईंको उपकरणलाई भाइरस संक्रमणको जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाहरूलाई कम गर्न, तपाईंलाई आफूले नचिनेका साइटहरूमा ईमेल ठेगाना दिन रोक्नुहोस्। र यदि तपाईंले ईमेल ठेगाना दिनुपर्दछ, वेबसाइट ईन्क्रिप्ट गरिएको छ भनि निश्चित गर्नुहोस्।
Your. तपाईको कम्प्युटरको भाइरस सुरक्षा अपडेट राख्नुहोस्
तपाईको एन्टि भाइरस अद्यावधिक भएको सुनिश्चित गर्न सँधै जाँच गर्नुहोस्। तपाईं सफ्टवेयरलाई स्वत: अद्यावधिक गर्न सेट गर्न सक्नुहुनेछ ताकि एक दिन छैन कि एन्टि भाइरसको मिति सकिएको छ (जसको मतलब भाइरसको अधिक एक्सपोजर हो)।
A. सुरक्षित ब्राउजर प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईको इ-मेल पहुँच गर्न राम्रो तरीकाले राखिएका साइटहरू प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो। तपाईले एक राम्रो ब्राउजिing अनुभव मात्र प्राप्त गर्नुहुन्न तर भाइरस फैलाउनको लागि सबै सम्भावित लफोलहरू पनि समेट्नुहुन्छ। तपाईं पनि आफ्नो ब्राउजरमा तपाईंको ईमेल सुरक्षा सेटिंग्स अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्ता सेटिहरूमा ब्राउजरलाई संवेदनशील सामग्री पहुँच गर्नबाट रोक्ने, तपाईंको ईमेल जंक फिल्टरको कठोरता, आदि समावेश गर्दछ।
Preview. ईमेल पूर्वावलोकन सुविधा खोल्नुहोस्
जब यस सुविधालाई सकृय गरिन्छ, तपाईं ईमेल नदेखिने भए पनि सामग्रीको झलक पाउन सक्नुहुन्छ। यसैले तपाईं निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि ईमेलमा समावेश भएको जानकारी ईमेल खोल्नु अघि सुरक्षित छ। ईमेल सेवाहरू जस्तै आउटलुकले यो सुविधा प्रदान गर्दछ।
Susp. संदिग्ध ईमेलहरूको Donts अवलोकन गर्नुहोस्
संदिग्ध ईमेलहरू ती ईमेलहरू हुन् जुन अज्ञात स्रोतहरू, चक्कल ईमेलहरू (व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोध्नेहरू), वा ती हुन् जुन शंकास्पद लिंक वा संलग्नक समावेश छन्।
अज्ञात स्रोतहरूबाट ईमेलका लागि:
एट्याचमेन्टहरू कहिले पनि खोल्नुहोस् वा ईमेलमा समावेश कुनै लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
कुनै पनि एट्याच्मेन्ट डाउनलोड नगर्नुहोस्
यदि तपाईंले पहिले नै एउटा स download्लग्नता डाउनलोड गरिसक्नुभयो भने, यसलाई भाइरसको लागि स्क्यान नगरे सम्म खोल्नुहोस्।
एक होक्स ईमेलको लागि, यसलाई खोल्न वा जवाफ दिन पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईं बस आफ्नो समय खेर फालिरहनु हुनेछ र तपाईंको कम्प्युटरलाई मालवेयरबाट संक्रमित हुने सम्भावना बढाउँदै जानेछ।
केहि ईमेलहरू तपाइँको कम्प्युटरमा संक्रमित भएको जानकारीको साथ आउँदछन्। तिनीहरूलाई तुरुन्त विश्वास नगर्नुहोस्। ईमेलको साथ अघि बढ्नु अघि तपाईको एन्टिभाइरस सफ्टवेयर प्रयोग गरी तपाईको कम्प्युटरको स्थिति जाँच गर्नुहोस्। त्यस्ता ईमेलहरू प्रायः तपाइँलाई लिंकमा क्लिक गर्न वा 'समाधान' को रूपमा संकेत गरिएको संलग्न खोल्नको लागि हो, तर यो वास्तविक अर्थमा ट्रोजन हो।
Your. तपाइँको ब्राउजि history ईतिहास र कुकीहरू प्राय: खाली गर्नुहोस्
कुकिजले तपाइँको ब्राउजि information जानकारी भण्डार गर्दछ ता कि यो सजीलो र छिटो हुन्छ सामान्य प्रयोग भएको वेब पृष्ठहरू पुनःलोड गर्न। यद्यपि, सूचनाको यी सानो बिटहरू तपाईंको ईमेल ठेगाना पहुँच गर्न द्वेषयुक्त दिमागले प्रयोग गर्न सक्दछ। तिनीहरूलाई सफा गर्नु त्यस्तो अपराधीहरूलाई तपाईंको ईमेल उजागर गर्ने जोखिम कम गर्न उत्तम तरिका हो।
इन्टर्नेट सुरक्षाको मामिलामा, कुनै पनि जानकारी समर्पण गर्दा वा तपाईंले ईमेल प्राप्त गर्दा यो उत्तम निर्णय प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ। यदि त्यहाँ केहि छ जसले तपाईंलाई निश्चित ईमेलको बारेमा शंकास्पद महसुस गराउँदछ भने, तपाईंले यसलाई राम्रोसँग खोल्नुहुन्न वा खोल्दा ठूलो सावधानी अपनाउँदैन। ईमेलको माध्यमबाट भाइरस पाउनेबाट जोगिन इन्टरनेट सुरक्षा मार्गनिर्देशनहरू अनुसरण गर्ने निश्चित मार्ग नहुन सक्छ, तर यसले यी भाइरसहरूको जोखिमलाई कम गर्न सक्दछ।